उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही हुन्छ - Karobar National Economic Daily
उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही हुन्छ
query_builderSeptember 11, 2017 11:23 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility6995
शिवकुमार मण्डल आपूर्ति मन्त्री
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल पनि बढ्न थालेको छ । वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्री बढी हुने हुँदा बजारमा कृत्रिम अभावसँगै कालोबजारी मौलाउने गर्छ । सरकारले यतिबेला हुन सक्ने कालोबजारी, महँगी, मिसावट, ठगी नियन्त्रण गर्नका लागि बजार अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
अन्य समयमा सेलाउने अनुमगनको कामलाई अहिले आएर विशेष रूपमा अगाडि बढाइएको छ । सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहुँदा बजारमा मूल्यवृद्धि हुनुका साथै तौलमा कमी, म्याद नाघेका, लेबल नभएका सामान बिक्री बढी हुने गर्छ । व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्ने गर्छन् ।
हरेक वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवसायीले दोब्बर–तेब्बर मूल्य लिई उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । चाडपर्वमा तात्ने गरेको बजार अनुगमन अन्य समयमा सेलाउने गरेको छ, जसका कारण वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढ्दै गएको छ ।
बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट, मिसावट, कमसल सामान बिक्री नियन्त्रण गर्न सरकारले बजार अनुगमन गर्ने गरेको भए पनि कैफियत गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहुँदा बजार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । चाडपर्वलाई लक्षित गरी उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि उपत्यकासँगै बाहिरी जिल्लामा सहुलियत पसल सञ्चालन गरिरहेको छ ।
चाडपर्वमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिको अवस्था, बजार अनुगमनलगायतका विषयमा आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं एक उपभोक्ता र मन्त्री हुँदा के फरक पाउनुभयो ?
उपभोक्ता हुँदाको अनुभव यस्तो रह्यो, जस्तो केही वस्तुको बार्गेनिङ गरेर मूल्य घटाउन खोज्ने, तत्काल आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि सकेसम्म बढीभन्दा बढी भाउ घटाउन खोज्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले आपूर्ति मन्त्रालयमा आएपछि सरकारकै आपूर्ति मन्त्री भइसकेपछि वस्तुसँग सम्बन्धित खरिद–बिक्री, गुणस्तर र परिमाणका साथै जनतालाई सहजता पु-याउनेप्रतिको जिम्मेवारी बढ्यो ।
यसलाई आम नेपाली नागरिकका निम्ति मैले पूरा गर्ने कर्तव्यका रूपमा ठानेको छु । आफूले तिरेको मूल्यअनुसारको गुणस्तर र परिमाणको सामान उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र व्यवसायीले पनि कानुनले दिएको अधिकारका साथै पुँजी लगानी गरेअनुसारको उचित प्रकारको नाफाको आस गर्नुपर्छ ।
उपभोक्ताको हितविपरीत बढी मुनाफा आर्जन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । व्यापारीले कानुनले दिएको अधिकारअनुसार नाफा खोज्नुपर्छ र उपभोक्ताले पनि आफूले तिरेको मूल्यबराबरको उचित परिणाम र गुणस्तरको सामान पाउनुपर्छ ।
चाडपर्व नजिकिँदै गरेका बेला आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्नुका साथै चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि १६ भदौदेखि सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरिरहेका छौं । अत्यावश्यक वस्तुमा केही निश्चित रकम छुट दिएका छौं । विभिन्न प्रकारका वस्तुमा आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्नका निम्ति नेपाल सरकार मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
दसैं, तिहार, छठ, बकर इदजस्ता महŒवपूर्ण चाडपर्वका निम्ति अत्यावश्यक वस्तु उपभोक्ताले बढी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला गलत प्रवृत्ति भएका मानिसले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बढी नाफा खोज्ने प्रवत्ति हाबी हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नका लागि उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराइएको छ ।
निजी व्यवसायीलाई पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उचित मूल्य घटाउन निर्देशन दिइएको छ । चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि घुम्ती सेवा समेत सञ्चालन गरिएको छ । चाडपर्वमा बजारमा चहलपहल बढी हुँदा व्यवसायीबाट उपभोक्ता ठगिन सकिने भन्दै अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिइएको छ ।
यसमा केही समस्या छ ?
समस्या हुँदै नभएको भन्ने होइन, भएका समस्यालाई कसरी सरलीकरण गर्र्ने भन्ने हो । सरलीकरण गर्ने भनेको एउटा अनुगमन हो भने अर्काे कुरा उपभोक्तालाई केही समस्या छ भने त्यसलाई सहज बनाउने । आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न घुम्ती पसलमार्फत उपभोक्तालाई वस्तु उपलब्ध गराउने हो ।
आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना के ल्याउ“दै हुनुहुन्छ ?
अहिले वस्तु सहज आपूर्ति गर्न र सुपथ मूल्यका वस्तु प्राप्त गर्नका लागि विशेष गरी सञ्चालन गरिएका सुपथ मूल्य पसल एउटा भयो र अर्काे अनुगमनको कुरालाई निरन्तरता दिने । मौसमीजस्तो चाडपर्वमा मात्र नभएर अन्य समयमा पनि अनुमगनकोे कामलाई तीव्रता दिने ।
बजारमा तोकिएको मूल्यभन्दा पनि व्यवसायीले बढी मूल्य लिने गरेको गुनासो आइरहेको छ । यसलाई रोक्न प्रभावकारी रूपमा अनुगमन अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन केही योजना बनाइरहेका छौं ।
त्यसमा पनि खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दुई रङको सिलिन्डर तयार लागू गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर काम गर्न लागेका छौं । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । ग्यासमा दुई रङको सिलिन्डर लागू गर्न कार्यविधि नै सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यसका लागि काम गरिरहेका छौं ।
बजारमा अनुगमनको काम चाडपर्वमा मात्र आएर मौसमी रूपमा मात्र हुने गर्छ, अन्य समयमा किन हुँदैन ?
बजारमा अनुगमको काम हेर्दा मौसमीजस्तो देखिएको छ, जसले गर्दा पनि अरू मन्त्रीले झैं गरेजस्तो देखिन्छ, तर यसमा फरक छ । फरक के छ भने मौसमी मात्र नभएर नयाँ संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशस्तरीय रूपमा अनुगमनको यसको संरचना बन्दै छ ।
राज्यको नयाँ पुनर्संरचनाअनुसार अनुगमनको कुरालाई व्यवस्थित गर्न राज्यले भौगोलिक संरचनासँगै प्रशासनिक संरचनाहरू त्यही अनुसारको विकास गर्न जरुरी छ । हिजो ७५ जिल्ला र २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा मुुलुक चलेको थियो भने अब फरक ढंगले गएको छ । उपभोक्ताका आवश्यकतासँगै हकहितका कुरालाई नयाँ संरचनाअनुसार लैजाँदै छौं ।
उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि त्यहीअनुसारको अनुगमनको संरचना विकास गर्दै छ । अनुगमनको कामलाई उपत्यकामा मात्र नभएर स्थानीय तहमा यसलाई विस्तार गरिँदै लगिनेछ ।
बारम्बार उपभोक्ता ठगिइरहन्छन्, तर यसलाई रोक्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
ठगी रोक्ने दुईवटा उपाय छन् । एउटा, सरकारका तर्फबाट कडाइपूर्वक कालोबजारी गर्ने व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार प्रयोग गर्ने । यसमा थप अर्काे कानुनको आवश्यकता परेको छ । अहिले भएका कानुनले दोषीलाई दण्डित गर्ने कुरा मात्र हुँदैन ।
कैफियत देखियो भने त्यस्ता व्यवसायीको लाइसेन्स सिल गर्ने र तत्काल फिल्डमा कारबाही गर्ने खालको कानुनी अधिकार हामीलाई चाहिन्छ । त्यस खालको कानुन संशोधनका निम्ति अगाडि बढिसकेको छ ।
अनुगमनको पाटोलाई व्यवस्थित गर्न केही कानुनी अप्ठ्याराहरू पनि छन् । नयाँ कानुन आवश्यक परेको हुँदा त्यसका लागि मन्त्रालय अगाडि बढिसकेको छ । ऐन संशोधन गरे तत्काल हुन सक्ने थियो ।
ऐन नै बनाउनुपर्ने हुँदा संघ र केन्द्रको चुनावले गर्दा केही ढिलाइ हुने देखिन्छ । अर्काे पार्ट के छ भने स्वयं उपभोक्ता पनि अलि सचेत हुन जरुरी छ । जनताको अधिकारलाई उनीहरूले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ । उपभोक्तालाई पनि आफूले खरिद बिक्री गर्ने वस्तुका बारेमा सामान्य जानकारी हुन अति जरुरी छ ।
व्यवसायीले यो ब्रान्डेड सामान भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको गुणस्तर र परिमाण ठीक छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने ज्ञान पनि उपभोक्तामा चाहिन्छ । उपभोक्ताले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने परम्परा छ । यसको आडमा व्यवसायीले अलि बढी कालोबजारी गर्ने खालको स्थिति देखा पर्न सक्छ । त्यसमा उपभोक्तामा वस्तु सम्बन्धित जानकारी हुनुपर्छ ।
उपभोक्तासम्बन्धी कानुन कमजोर अथवा कारबाही फितलो हो ?
कानुनी पक्ष र कारबाही पक्ष फितलो दुवै हुन सक्छ । कानुन हुने तर इच्छाशक्ति नहुने हो भने त्यो कानुनको काम छैन । तर, कानुन जे छ त्यसमा इच्छाशक्ति छ भने कैफियत गर्ने जो–कोहीलाई सजिलै कारबाही गर्न सकिन्छ । हामीसँग विद्यमान केही कानुन छन् । त्यसका आधारमा कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । इच्छाशक्तिका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौं, जसका कारणले गर्दा पनि बजार क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने देखिन्छ ।
कानुनलाई समसामयिक बनाउन र सोही अनुसारको इच्छाशक्ति पनि आवश्यक छ । अहिले इच्छाशक्ति तीव्र भएकाले र त्यसका आधारमा बढीभन्दा बढी कानुन उपयोग गर्ने काम भइरहेकाले पनि जतिसक्दो छिटो नतिजा देखिनेछ ।
ब्रान्डेड सामानमा खरिद मूल्य सस्तो देखाएर मह“गोमा बेच्ने गरेको देखियो । भन्सारमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको हो ?
व्यवसायीले २६ सयमा खरिद गरेको सामानलाई २६ हजारमा बिक्री गरेकै छन् । त्यसमा उपभोक्ताले कति बार्गेनिङ गर्ने ? भन्सार छलेको छ भने भन्सारसँग कुरा गर्नुप¥यो । पसलको भाडा बढेको छ भने घरधनीसँग कुरा गर्नुप-यो ।
अनावश्यक घरभाडा किन बढाइयो, यसलाई सरकारले कारबाही गर्नुप¥यो भनेर व्यवसायीले कुरा उठाउनुप-यो । व्यवसायीका जायज माग सरकारले सुनेन भने त्यति बेला कुरा उठाउनुप¥यो । त्यसबारेमा सरकारलाई कुनै जानकारी नदिई सटरभाडा बढेको देखाई जनतासँग उठाउन पाइँदैन ।
चाडपर्व निजिकि“दै आइरहेका बेला बजारमा आपूर्ति समस्या त हुँदैन नि ?
बाढीपहिरोका कारण केही नाका बन्द भएका छन् । जोगबनीसहितका केही नाका खुल्ने क्रममा छन् । वैकिल्पक नाका प्रयोग भएकाले पनि आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन ।
अहिले नियमित रूपमा सामानको आपूर्ति भएकाले पनि बजारमा केही अभाव छैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानसँग पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात रहेकाले पनि चाडपर्वमा बजारमा सामानको अभाव हुँदैन ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधनको प्रक्रिया के भइरहेको छ ?
ऐन संशोधन भएको भए चाँडो हुने थियो । ऐन नै नयाँ ल्याउन लागेकाले पनि समय लागेको हो । ऐनमा तत्काल फिल्डमा बजार निरीक्षकले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ । कैफियत गर्ने व्यवसायीलाई जेल र जरिवाना हदैसम्मको हुने छ ।
एक–दुई पटकसम्म कैफियतदेखि व्यवसायको लाइसेन्स नै खारेज हुने व्यवस्था ऐनमा गर्न लागिएको छ । यसले बजारमा हुने कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ ।
कैफियत गर्ने व्यवसायीलाई राजनीतिक संरक्षणमा कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिने गरेको भनिन्छ नि ?
त्यस्तो छैन, इमानदारीतापूर्वक व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई पनि गलत तरिकाले हेरिँदैन । यदि व्यवसायीले गरेको कारोबार ठीक छ भने तिनलाई कारबाही गरिँदैन, तर जो व्यवसायी दोषी छ त्यसलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गरिन्छ ।
को, कसले व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिन्छन् त्यसका बारेमा म जान्दिनँ, तर म आपूर्ति मन्त्री हुँ, दोषी भेटे कारबाही गरेरै छाड्छु । कुनै व्यापारीसँग पनि मेरो सम्बन्ध छ, तर गलत काम गर्नका लागि सम्बन्ध बनाएको होइन नि ! कुनै व्यक्ति राजनीतिसँग सम्बद्ध छ भने त्यसलाई चोरी, गलत काम, बदमासी गर भनेर संरक्षण दिइँदैन ।
व्यवसायीसँग चन्दा माग्ने हुँदा पनि कैफियत गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिँदैन भन्ने आरोप छ नि ?
चन्दा दिने त नेपालमा परम्परा नै छ । हामीले माग्दैनौं भन्ने पनि होइन, चन्दा पनि चोरेर दिने होइन भनेर व्यवसायीले बुझ्न जरुरी छ । व्यवसायीले पनि सकेको चन्दा दिने हो, तर उपभोक्तालाई ठगेर दिने होइन ।
म विभागीय मन्त्री भएको नाताले पनि अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए कारबाही गर्ने हो । व्यवसायीले छुट्कारा दिनका लागि उच्च तहबाट जति नै प्रेसर आए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरेरै छाड्नेछु ।
संस्थानको संस्थागत सुधार कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
संस्थानको संस्थागत सुधार गर्नका लागि हाल देखिएका समस्या समाधान गरिँदै छ । नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन, नेसनल टे«डिङ लिमिटेडभित्र रहेका समस्या समाधान गर्न लागिरहेका छौं । तेलको क्यालिब्रेसन, गुणस्तर र ग्यासको विषय अगाडि बढाउँदैछौं । विकट दुर्गम जिल्लामा मागअनुसारको खाद्यान्न पठाउन निर्देशन दिइरहेका छौं ।
नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने आइरहेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
इन्धन भन्डारणका लागि जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने विषय म मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै उठेको हो । यस विषयमा व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ, लेखा समितिले छानबिन गरी अख्तियारमा समेत मुद्दा परिसकेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले पनि छानबिनको प्रक्रिया थालेको छ । कानुनी रूपमा जग्गा खरिदको विषयमा दोषी ठहर नहुन्जेलसम्म कारबाही गर्ने भन्ने देखिँदैन ।
मैले अहिले इमोसनलमा आएर कारबाही गरुँला, तर पछि अदालतले त्यसलाई फकाईदियो भने के होला ? मैले पाइला सार्नुअघि धर्ती भासिन्छ कि भासिँदैन भनेर हेनुपर्छ । यस विषयमा भन्न जति सजिलो छ तर गर्न धेरै गाह्रो छ ।
जग्गा खरिदमा प्रमाण भेटेपछि त्यसबेला मैले कारबाही गरिनँ भने मन्त्रीले कैफियत गरे भन्ने हुन्छ । प्रचलित मूल्यभन्दा बढीमा जग्गा खरिद बढी गरिएकाले पनि मैले यसमा कैफियत छ भन्दै आएको हुँ । कैफियत आयल निगमले ग¥यो वा टेन्डरकर्ता वा बिचौलियाले ग¥यो ।
कैफियत त गरेको छ, तर त्यसको सत्यतथ्य प्रमाण नआउन्जेल कारबाही अगाडि बढाउन सकिँदैन । मन्त्रालयले जग्गा खरिदको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
कालोबजारी मूल्यवृद्धि बजार चाडपर्व आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार